လူနှစ်ယောက်က ထပ်တူကျပြီးတူညီနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ဖို့ကလည်း ရာနှုန်းနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ချစ်သူနှစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ သက်တမ်းကြာလာတာနဲ့ အမျှတစ်ယောက်စိတ်ကို တစ်ယောက်နားလည်လာပြီး ဖွင့်မပြောပေမယ့်လည်း ခံစားချက်တွေ အကျင့်တွေ အပြုအမူတွေ ထပ်တူကျလာတတ်ပါတယ်။
၁. ပထမဦးဆုံးလူ ဖြစ်စေခြင်း
တစ်ခုခုဆုံးဖြတ်စရာ တိုင်ပင်စရာကိစ္စကြုံလာတဲ့အခါ တခြားသူတွေထက် သင့်ကို ပထမဆုံးအသိပေးပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တတ် ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကို အရင်ဆုံးပြောပြ တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အကြံပြုချက် ဝေဖန်ချက် ချီးမွမ်းစကားတွေကို ပထမဆုံးကြားချင်လို့ ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။
RECOMMENDED FOR YOU - စားဖိုမှူးဖြစ်ချင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ
တချို့ဇာတ်ကားတွေက အူကြောင်ကြောင်ကိစ္စများ၊ ရယ်စရာဟာသများတွေ့တိုင်း သင့်ကိုယ်သင် ရယ်မိနေတယ်ဆိုတာ သတိမထားမိအောင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တိုင်ပင်မထားဘဲ သူမရယ်သံတွေနဲ့ အပြိုင်အတူတူ လိုက်ရယ်မိနေလို့ပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရာရာကို နားလည်နိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ယောက်ရဲ့အားနည်းချက် အားသာချက်တွေကလည်း တစ်ယောက်အတွက် အပြန်အလှန် ခွန်အားတွေဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
သင်နားမလည်တာရှိရင် သူ့ဘက်က အဖြေထုတ်ပြီးသားဖြစ်သလို သူ့ဘက်က လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်း သင့်ဘက်ကဖြည့်ဆည်းပြီးသားဖြစ်နေတာမျိုးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၄. ချစ်လားလို့ တဖွဖွမေးနေစရာ မလိုခြင်း။
ချစ်သူဖြစ်ခါကာစတော့ ချစ်လား ချစ်လားလို့ ခနခနမေးနေတတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်သက်တမ်း ကြာလာတဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုနဲ့ တည်ဆောက်လာတဲ့ relationship ဖြစ်လာတဲ့တွက် နားလည်မှုတွေ ပြည့်လာတဲ့အခါ မေးစရာမလိုပဲ ဖြေစရာမလိုပဲ စိတ်ကို အလိုလိုနားလည် လာပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ဒီလိုရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီပြီး လိုက်ဖက်တဲ့စုံတွဲမျိုးက တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန် လေးစားတန်ဖိုးထားကြတာ များပါတယ်။
နှစ်ယောက်လုံးအဆင်ပြေစေမယ့် မျှတတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ သတ်မှတ်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အလျှော့အတင်းလေးတွေနဲ့ ထိန်းညှိပြီး နေရင်တော့ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ကဲ RS လေးတွေ လက်ရှိအချစ်ရေးကို ဒီလိုပုံစံနဲ့ဖြတ်သန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်တို့ဟာ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သေချာပေါက် ပြောလို့ရပါတယ်။
လူနှဈယောကျက ထပျတူကပြွီးတူညီနိုငျဖို့ဆိုတာ မလှယျပါဘူး။ ဖွဈနိုငျဖို့ကလညျး ရာနှုနျးနညျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လုံးဝမဖွဈနိုငျတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ ခဈြသူနှဈယောကျဆိုရငျတော့ သကျတမျးကွာလာတာနဲ့ အမြှတဈယောကျစိတျကို တဈယောကျနားလညျလာပွီး ဖှငျ့မပွောပမေယျ့လညျး ခံစားခကျြတှေ အကငျြ့တှေ အပွုအမူတှေ ထပျတူကလြာတတျပါတယျ။
၁. ပထမဦးဆုံးလူ ဖွဈစခွေငျး
တဈခုခုဆုံးဖွတျစရာ တိုငျပငျစရာကိစ်စကွုံလာတဲ့အခါ တခွားသူတှထေကျ သငျ့ကို ပထမဆုံးအသိပေးပွီး ဆှေးနှေးတိုငျပငျတတျ ပါတယျ။
ပြျောရှငျစရာကိစ်စကွုံလာတဲ့အခါမှာလညျး ကိုယျ့ရဲ့ခဈြသူကို အရငျဆုံးပွောပွ တတျကွပါတယျ။ ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ အကွံပွုခကျြ ဝဖေနျခကျြ ခြီးမှမျးစကားတှကေို ပထမဆုံးကွားခငျြလို့ ဖွဈတဲ့အတှကျပါ။
တခြို့ဇာတျကားတှကေ အူကွောငျကွောငျကိစ်စမြား၊ ရယျစရာဟာသမြားတှတေို့ငျး သငျ့ကိုယျသငျ ရယျမိနတေယျဆိုတာ သတိမထားမိအောငျ ဖွဈလဖွေ့ဈထ ရှိပါတယျ။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ တိုငျပငျမထားဘဲ သူမရယျသံတှနေဲ့ အပွိုငျအတူတူ လိုကျရယျမိနလေို့ပါပဲ ဖွဈပါတယျ။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အရာရာကို နားလညျနိုငျနပွေီဖွဈတဲ့အတှကျ တဈယောကျရဲ့အားနညျးခကျြ အားသာခကျြတှကေလညျး တဈယောကျအတှကျ အပွနျအလှနျ ခှနျအားတှဖွေဈစပေါလိမျ့မယျ။
သငျနားမလညျတာရှိရငျ သူ့ဘကျက အဖွထေုတျပွီးသားဖွဈသလို သူ့ဘကျက လိုအပျခကျြတှရှေိရငျလညျး သငျ့ဘကျကဖွညျ့ဆညျးပွီးသားဖွဈနတောမြိုးကို ဆိုလိုခွငျးဖွဈပါတယျ။
၄. ခဈြလားလို့ တဖှဖှမေးနစေရာ မလိုခွငျး။
ခဈြသူဖွဈခါကာစတော့ ခဈြလား ခဈြလားလို့ ခနခနမေးနတေတျပါတယျ ဒါပမေယျ့သကျတမျး ကွာလာတဲ့အခါ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ နားလညျမှုနဲ့ တညျဆောကျလာတဲ့ relationship ဖွဈလာတဲ့တှကျ နားလညျမှုတှေ ပွညျ့လာတဲ့အခါ မေးစရာမလိုပဲ ဖွစေရာမလိုပဲ စိတျကို အလိုလိုနားလညျ လာပါတယျ။
မြားသောအားဖွငျ့ ဒီလိုရှသှေ့ားနောကျလိုကျညီပွီး လိုကျဖကျတဲ့စုံတှဲမြိုးက တဈယောကျကို တဈယောကျ အပွနျအလှနျ လေးစားတနျဖိုးထားကွတာ မြားပါတယျ။
နှဈယောကျလုံးအဆငျပွစေမေယျ့ မြှတတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ သတျမှတျပွီး တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အလြှော့အတငျးလေးတှနေဲ့ ထိနျးညှိပွီး နရေငျတော့ ပိုကောငျးပါလိမျ့မယျ။
ကဲ RS လေးတှေ လကျရှိအခဈြရေးကို ဒီလိုပုံစံနဲ့ဖွတျသနျးနတေယျဆိုရငျတော့ သငျတို့ဟာ လိုကျဖကျညီတဲ့ စုံတှဲတဈတှဲ ဖွဈတယျဆိုတာ သခြောပေါကျ ပွောလို့ရပါတယျ။
Read 4208 times Last modified on Thursday, 14 September 2017 17:09
ကမ္ဘာမှာ အထူးဆန်းဆုံး ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ဖြစ်စေခဲ့သော လူဆယ်ဦး
သင်ရဲ့ မအောင်မြင်ခြင်းက ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲ